Ciidamada Maraykanka Ee Ku Sugna Saldhigyadii Ay Iran Gantaalaha Ku Duqaysay Ayaa La Sheegay Inay Ka Sii War-hayeen Weerarka Ku Soo Maqan Iyo Cida Xogta u Gudbisay | Marsa News
Ciidamada Maraykanka Ee Ku Sugna Saldhigyadii Ay Iran Gantaalaha Ku Duqaysay Ayaa La Sheegay Inay Ka Sii War-hayeen Weerarka Ku Soo Maqan Iyo Cida Xogta u Gudbisay
Hargeisa:(Marsanews) Raysal wasaaraha Iraq ayaa shaaca ka qaaday in Iran ay u sii sheegtay weerarkii xalay ay ku qaaday labada saldhig ee ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin dalkaas.
Iran ayaa dhowr iyo toban gantaal xalay la beegsatay saldhigyada Ain Al-Shamsi iyo Erbil, tiyoo ay jawaab aargudasho ah uga dhigaysay weerarkii Mareykanku ay ku dileen Jeneral Qasem Soleimani.
Inkasta oo Iran ay sheegatay dilka 80 askar, ayaa haddana askarta Mareykanka la rumeysan yahay inaanay wax dhaawac ama dhimasho ah ka soo gaadhin weerarkaasi.
Waxaana wararka qaar sheegayaan in ay jirto dareeno laga qabo in askarta ama ciidamada maraykanka ee labadaa saldhig ku sugnaa ay hayeen xogta weerarka gantaalaha ee ku soo wajahnaa.
Afhayeenka raysal wasaare Adel Abdul Mahdi ayaa sheegay in Iran ku soo war-gelisay in weerar soo socda.
Adel Abdul Mahdi ayaa la rumeysan yahay in qofka xogtaasi sii gudbiyay ee la wadaagay ciidamada maraykanka inuu isaga yahay, kadibna ciidamada Mareykanku ay sii galeen dhufeysyo dhulka hoostiisa ku yaalla, waana ta keentay inaanay wax dhibaato ah soo gaadhin.
Sidoo kale dalalka xulufada la ah Mareykanka ee ciidamadoodu ay ku sugan yihiin labada saldhig ee Iran ay weerartay ayaa sheegay in aanay jirin wax khasaare nafeed ah oo soo gaadhin askartooda.
“Waxaa shaqeeyey habkeena digniinaha gantaallada” ayuu yiri sarkaal Mareykan ah oo la hadlay wargeyska USA Today.
Dadka siyaasadda fallanqeeya ayaa rumeysan xaqiiqda ah in weerarkaas aanay ku dhiman askar Mareykan ahi, inay tahay mid gobolka ka bad-baadisay dagaal, sababtoo ah Mareykanka ayaa la rumeysan yahay inuu aargudan lahaa haddii askar ka mida ciidankoodu ku dhiman lahaayeen weerarkii gantaalaha iiraan.
Hoggaamiyaha sare ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in weerarkii Iran ay xalay qaadday uu ahaa “dhirbaaxo wejiga lagag dhuftay” Mareykanka, waxaana uu ku baaqay in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan gobolka.